Ny fampiharana tsara indrindra hanararaotana ny varotra Janoary | Vaovao IPhone
Ny fampiharana tsara indrindra hanararaotana ny varotra Janoary
Tonga ny varotra, ary na eo aza ny fisian'ny antsasaky ny volana janoary dia angamba liana amin'ny fanaovana ny fihenan'ny fihenam-bidy isika hahazoana ilay palitao izay naka fanahy antsika nandritra ny volana maro, na satria fotsiny hoe te hanova ny fitafiana mahazatra amin'ny «lamaody à la" iray hafa. Noho io antony io dia hanao fanangonana kely amin'ireo fangatahana fivarotana lamba tsara indrindra izahay amin'izay hahafahanay manararaotra ny varotra indrindra nefa tsy handao ny trano akory, handray ny akanjonay amin'izay toerana tadiavinay, ary misy aza mamela izahay handoa amin'ny Apple Pay. Mandeha any izahay miaraka amin'ireo rindranasa tsara indrindra hanararaotana ny varotra Janoary avy amin'ny iPhone.
Ny mpitarika, Zara, dia tsy afaka teo Izy io dia laharana faha-19 ao amin'ny iOS App Store any Espana ary mety hiakatra, manana fizarana natokana ho an'ny fihenam-bidy amin'ny fampiharana ary ny fandefasana ny fividianana fividianana mihoatra ny € 30 dia ho afaka tanteraka. Manana fampiharana ho an'ny Apple Watch izy ary 49 MB ihany ny lanjany.
Misintona & mitondramaimaim-poana
Manohy miaraka amin'ny vondrona iray hafa izahay, Misintona & mitondra, ny fandidiana sy ny interface dia mitovy amin'ny an'i Zara, raha ny marina dia mitovy 49 MB ny lanjany. Ity rindrambaiko ity dia manana ny tombony rehetra amin'ny vondrona Inditex ary koa misy fizarana natokana ho an'ireo varotra volana janoary mahafinaritra ireo.
MANGO - lamaody an-tseraseramaimaim-poana
Mango dia iray amin'ireo gadra lamba lehibe an'ny firenena ary izany koa dia manana fangatahana ho an'ny iOS. Izy io koa dia manana faritra miavaka amin'ny varotra. Manana rindrambaiko ho an'ny Apple Watch izy, ary mahaliana fa 49 MB ihany ny lanjany, toa ilay mpamorona iray ihany no manao ny fampiharana ny rojom-pitafiana rehetra.
H&M - tianay ny lamaodymaimaim-poana
Mandeha any izahay miaraka amin'ny iray farany amin'ny lisitra, H&M koa dia manome antsika fampiharana mitovitovy amin'izanyNa izany aza, toa tsy dia avo loatra ny naoty ao amin'ny iOS App Store. Milanja 52 MB ity fampiharana ity ary izy irery no tsy manana fampiharana ho an'ny Apple Watch.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ny fampiharana tsara indrindra hanararaotana ny varotra Janoary
Avia ... nangataka anao ity lahatsoratra ity hanoratra azy amin'ny zanakao vavy ... Azoko antoka fa mifantoka kokoa amin'ireo zavatra ireo izy fa tsy isika hehehehe
Jailbreak ho an'ny iOS 10.2 eo imasony ... fa tsy ho an'ny iPhone 7